တဖြည်းဖြည်း အရပ်ရှည်လာသော သရဲကြီး | AnZarTone
by AnZarTone တဖြည်းဖြည်း အရပ်ရှည်လာသော သရဲကြီး
အဲဒီ ခပ်မည်းမည်းလေးက လရောင်ဖျော့ဖျော့ အောက်မှာ ရုပ်လုံးပီပြင်လာပါတယ်။ ကိုသာအောင်ဆီကို တည့်တည့်ကို ရွေ့လျားလာတာပါ။ ကိုသာအောင်ကလည်း အဲဒီ ခပ်မည်းမည်း ကို ရပ်ကြည့်ပြီး စောင့်နေလိုက်တယ်။ ဒီလို စောင့်နေရင်းနဲ့ ခဏကြာတော့ ကိုသာအောင် သူ့မျက်လုံးကို သူ ပြန်ပွတ်ကြည့်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီ ခပ်မည်းမည်း က ပုံမှန်ထက် ပိုပြီးများ အရပ်မြင့်လာသလားလို့။
source : http://mandalaygazette.com/55248/creative-writing
This entry was posted in ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ and tagged မဟာရာဇာ အံစာတုံး, သရဲ. Bookmark the permalink.
← ဟိုးထား သကြားမင်း	စံထူးနှင့် ဖိုးသူတော် →